အချိန်မတန်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှု မဖြစ်စေဖို့အတွက် စားပေးသင့်တဲ့ မနက်စာ(၆) မျိုး
နှစ်ရှည်အရေပြားကို ခွာထုတ်သွားသလို မျက်နှာပြင်ကိုပြန်နုပျိုစေတဲ့ အစားအစာထက်ကောင်းတာ ဘာများရှိသေးလို့လဲ။ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာကို စားသုံးခြင်းဟာ ပိုမိုအသက်ရှင်ကျန်းမာစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေနိုင် ပါတယ်။်မနက်တိုင်း ဒီအစာပြေ (၆) မျိုးနဲ့ သင့်ကိုသင် နုပျိုအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။
KIA ဖမ်းဆီးခံ လယ်သမားတစ်ဦး ငွေ(၉)သိန်းပေးမှ ပြန်လွတ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ တာဟိုနားကျေးရွာနေ လယ်သမားတစ်ဦးအား ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရာ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် ငွေပေး ကာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်လိုက်သည့် တောင်ကိုရီးယား ဘောလုံးအသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ပါ့ခ်ဂျီဆန်
တောင်ကိုရီးယား လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ပါ့ခ်ဂျီဆန်သည် ဇူလိုင်(၂၇)ရက်နံနက်ပိုင်းက ၎င်း၏ချစ်သူ ကင်မ်မင်ဂျီနှ င့် လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပါတော်မူဇာတ်ကို အနော်မာသုခုမ အနုပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ ကပြတင်ဆက်မည်
အနော်မာ သုခုမအနုပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၏ ပွဲဦးထွက်ဖြစ်သည့် " စိန်မဟာသဘင်၏ ပါတော်မူဇာတ်" ကို ကပြနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု အနော်မာသုခုမ အနုပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ပတ္တမြားကေခိုင် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ယင်း အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲကို သြဂုတ်လ ၃ဝ ရက်နှင့် ၃၁တို့ တွင် အလုံမြို့နယ်၊ မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံ၌ ည ၇ နာရီမှ စတင်ကာ ကပြဖျော်ဖြေကြမည် ဖြစ်သည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော ကုလားတန်မြစ် (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
နိုင်ငံတော်အစိုးရအပါအ၀င် ပြည်နယ် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ ထပ်မံ မဖြစ်ပွားရေး အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြသော်လည်း ပြစ်မူကျူးလွန်သူများကို ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထိထိရောက်ေ ရာက် အရေး ယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ရှေ့တွင် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲနိုင်ကြောင်း ရခိုင်ဒေသခံများက ပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ပိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် အမှတ် (၃) သမဝါယမနှင့် ဒေသခံ လယ် သမားတို့ကြား ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် လယ်မြေများကို လယ်သမားများ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုရန် သဲ ကုန်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၅ ထုတ်ကာ တားမြစ် လိုက်ကြော င်း ဒေသခံ လယ်သမားများက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှု Hotline No. 1880
စတင်ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသည့်အချိန်မှစ၍ယခုအချိန်ထိယာဉ်မတော်တဆမှုများ၊လူသေဆုံးမှုများအများအပြားဖြစ်ပေါ်နေသော ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပြသနာများဖြစ်ပေါ်လာသော အခါ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် Hotline No.1880 ကို FOREVER GROUP နှင့် Blue Ocean Co.ltd တို့မှပူးပေါင်း၍ (၂၈.၇.၂၀၁၄)ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အစာမကြေရောဂါသည် အဖြစ်အများဆုံးရောဂါဖြစ်ပြီး လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် မဟုတ် တစ်ကြိမ် တွင် ဖြစ်ပွားကြမည်ဖြစ်လေသည်။ သို့မဟုတ် ဖြစ်ဖူးခဲ့ကြမည်ဖြစ်လေသည်။ အစာ မကြေရော ဂါ သည် အစာအိမ်ရောဂါများထဲတွင် အစဦးရောဂါဖြစ်လေသည်။
လေယာဉ်ပျံသန်းမှု လမ်းကြောင်းများ တိတိကျကျ သတ်မှတ်နိုင်ရန် မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း တောင်းဆို
MH17 လေယာဉ်ပျက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ် ချထားသည့် အမှတ်တရ ပန်းစည်းကို တွေ့ရစဉ်
ခရီးသည်တင် လေယာဉ်များ၏ ပျံသန်းမှု လမ်းကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို အားကောင်းသော နိုင်ငံ တကာ စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်နိုင်ရန် မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အကြံပြုခဲ့ သည်။
ဦးကျော်နေ၀င်းမှ နိုင်ငံတော်သို့ တင်ပြထားသောအမြန်ယာဉ်ကြောစနစ် (BRT) အား မကြာခင် ခွင့်ပြုသွားမည်ဟုဆို
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏မြေး ဦးကျော်နေ၀င်းမှ (OMNI FOCUS CO-MPANY LIMITED) နိုင် ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြထားသော BRT စနစ်အား (အမြန်ယာဉ်ကြောစနစ်) မကြာခင်ခွင့်ပြုသွားနိုင် မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
အငြင်းပွားဖွယ် အကျဉ်းသား (၂၉) ဦး လွတ်မြောက်ရေး အတွက်သာ နိုင်/ကျဉ်း စစ် ကော်မတီလုပ်ဆောင်မည်
လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီ အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အကုန်တွင် အကျဉ်းထောင် ထဲမှ ပြန်လည်မလွတ်မြောက်ခဲ့သော အငြင်းပွားဖွယ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၂၉) ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရန်သာ လုပ်ဆောင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော် မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ထံမှ သိရသည်။
MH17 လေယာဉ်ပျက် နေရာသို့ နိုင်ငံတကာတပ်များ စေလွှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု နယ်သာလန် ဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ခံ
MH17 လေယာဉ်ပျက်ကျသည့် နေရာတွင် နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စေလွှတ်ပြီး လုံခြုံရေးယူရန် ဆိုသော ကိစ္စသည် လက်တွေ့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နယ်သာလန် ဝန်ကြီးချုပ် မာ့ခ်ရူတေးက ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။
အတန်းဖော်ကို သတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြတ်တောက်သည့် ဂျပန်ကျောင်းသူ အဖမ်းခံရ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အတန်းဖော်တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း များ ဖြတ်တောက် လှီးဖြတ်ခဲ့ သည့် ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ရဲများက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တည်းခိုခန်းမန်နေဂျာနှင့် ဧည့်သည်တို့စကားများစဉ် မန်နေဂျာမှဓါးဖြင့်ထိုး၍ ဧည့်သည်သေဆုံးခဲ့ပြီး အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှုအား ဖော်ထုတ်အရေးယူ
လှိုင်မြို့နယ်နေ ဦးရန်နောင်ကျော်သည် ၎င်း၏ညီဖြစ်သူ ကိုကျော်မျိုးထွန်းမှာ ၂၀.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ အချိန် ခန့်တွင် နေအိမ်မှအပြင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုထွက်သွားခဲ့ရာ ၂၂.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၁၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့မရဲစခန်းမှ ၎င်း၏လက်ကိုင်ဖုန်းသို့ဆက်သွယ်လာပြီး ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ စိတ်ကူးသစ် တည်းခိုခန်းသို့လာရောက်ရန်ခေါ်သဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ တည်းခိုခန်းရှိ အခန်းအမှတ် (၁၀၅)တွင် ညီဖြစ်သူတည်းခိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပြီး ၎င်းအားမတွေ့ရဘဲ ကုတင်ပေါ်ရှိ ခေါင်းအုံးနှင့် အခင်းတို့တွင် သွေးများပေကျံနေကာ ဓါး(၁)ချောင်းနှင့် ညီဖြစ်သူ၏ဖုန်း(၁)လုံးတို့မှာ အခန်းအတွင်း၌ရှိနေ သည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် တည်းခိုခန်းရှိ တာဝန်ရှိသူများထံမေးမြန်းရာ ညီဖြစ်သူ ကိုကျော်မျိုးထွန်းမှာ ၂၁.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၂၀၀ အချိန်ခန့်တွင် တည်းခိုခန်းမှ အပြင်သို့ထွက်ခွာသွား ခဲ့ကြောင်း ပြောပြ သိရှိရသဖြင့် ညီဖြစ်သူအား လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါသည်။
ဆန်ဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင် တွေ့ရသည့် ဆန်အိတ်များ ( ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ) )
ပြည်တွင်း၌ ဆန်ဈေး ဆက်တိုက် မြင့်တက်လာသော်လည်း တရုတ်ကုန်သည်များက ဈေးတိုး မပေး သဖြင့် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း (အညာဒေသ) မှ ဆန်များကိုသာ အဓိကထား တင်ပို့နေရကြောင်း မူဆယ် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်းမှ သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်မှုလုပ်ငန်း ၄၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အထဲက ၄ ပုံ ၁ ပုံ ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဟာ လုံးဝ အခွန်မဆောင်ပဲ အခွန်ရှောင်နေတဲ့အတွက် စိစစ်မှုတွေ စပြီး လုပ်နေပြီလို့ ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနရုံးရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
မယ်စကြ၀ဠာ (မြန်မာ) ၂၀၁၄ပြိုင်ပွဲကို ဇူလိုင် ၂၆ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ ပွဲကျင်းပသည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ် သက် ၍ ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သလို ဆုရရှိသည့် အလှမယ်မှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုနှင့် လွဲချော် ခဲ့သောကြောင့်ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိယာဉ်များအား သြဂုတ် ၁ ရက်မှစ၍ ညသိပ်ခွင့် မပြုတော့
မင်းရဲကျော်စွာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမှ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်တွင် ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့သည့် လှိုင်မြို့နယ် ယာဉ်ရောင်း ဝယ်ရေးစခန်းအား သြဂုတ် ၁ ရက်မှ စတင်၍ ညသိပ်ယာဉ် များ ရပ်နားခြင်းကို ခွင့်ပြု သွားတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအခွန်ဌာန လက် ထောက်ဌာနမှူး ဦးအေးဝင်းက ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် လှိုင် ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း တွင်ပြုလုပ်သည့် စာနယ်ဇင်းရှင်း လင်းပွဲတွင် ပြောကြားသွားသည်။
နိုင်ငံခြားဘဏ်များကို ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများသို့ ငွေချေးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်
နိုင်ငံခြားဘဏ်များကို ပြည်တွင်း၌ ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု ရာတွင် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများ သို့ ငွေချေးခွင့် မပြုဘဲ ပြည်တွင်းဘဏ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၌မှတ်ပုံတင် ထားသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ ကို သာ ငွေချေး ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားဘဏ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန် ထားသော ညွှန် ကြား လွှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 13:40 No comments:
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းကို အပေါ်စီးမှ မြင်တွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
အောင်မင်္ဂလာအဝေး ပြေးကားဝင်းအတွင်းတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသတ်ခံရသည့် အနေအထားဖြင့် သေ ဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နံနက်ကအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းလွတ်တစ်ခုတွင် လည်ပင်း ညှစ်ခံထားရသည့် လက္ခဏာဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးနေကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတစ်ဦးကပြော သည်။
ကချင်ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်များ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည် လုပ်ပိုင် ခွင့်ပြုသော် လည်း ဒေသခံအစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက လုံခြုံရေးအာ မခံချက် နှုတ် ဆိတ်နေမှုအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်များ စိုးရိမ်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၇- အပစ်အခတ် ကြောင့် နှစ်နှစ်ကျော် ရပ်နားခဲ့ရသည့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လုံးခင်း၊ ဖားကန့် ရတနာမြေ ၊ မော်လူးမော် ဟန်ရတနာမြေနှင့် ခန္တီးရတနာမြေ အတွင်းရှိ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်မှုအား သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ တူးဖော် ခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းဒေသအတွင်းရှိ ပြည်နယ်အ စိုးရနှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်တို့မှ လုံခြုံရေးအာမခံ ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်မှုမရှိခြင်းအပေါ် ကျောက် စိမ်း လုပ်ကွက်ကုမ္ပဏီများက စိုးရိမ်မိ ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သည်။
ညောင်တုန်း ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် စက်ရုံကို ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုကို ပဏာမ ရွေးချယ်
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း လက်အောက်တွင် ရှိသော ဧရာဝတီ တိုင်းဒေ သ ကြီး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ရိုးကြီးရွာအနီးရှိ ညောင်တုန်း ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် စက်ရုံကို ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုကို ပဏာမ ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းထံမှ သိရသည်။
သာကေတ အမှတ်(၁)ဈေး မီးလောင်မှု ကျပ် သိန်း ၉၀ ကျော် ဆုံးရှုံး
သာကေတမြို့နယ်၊အမှတ်(၁) အနော်မာရပ်ကွက်၊ ဇင်္ဂမလမ်းနှင့် မင်းနန္ဒာလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၁)ဈေးတွင် ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် စတင်လောင်ကျွမ်းသည့် မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ် ၉၁ သိန်းကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်က ထုတ်ပြန် ထားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း နယ်မြေအတွင်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ပြီး လေးခွနှင့် ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက် သဖြင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ ဒဏ်ရာများ ရရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း နယ်မြေအတွင်း ဇူလိုင် ၂၆ရက်က မိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ပြီး လေးခွ၊ ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက် ခဲ့သဖြင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မြေယာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေခြင်းကို အဖြေ ရှာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပြု လုပ်ရန် ဗဟိုအစိုးရက နိုင်ငံတော် အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ပြုလုပ် ရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာနမှ အင် ဂျင်နီယာမှူးကြီး တစ်ဦးကပြော ကြားသည်။
ဖလော်ရီဒါ ကမ်းခြေက လေယာဉ်တိုက်မှု မြင်ကွင်း၊ ဓာတ်ပုံ- NBC
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါကမ်းခြေတခုမှာ အင်ဂျင်တလုံးတပ် လေယာဉ်တစီးက လမ်းလျှော က်နေ သူ ၂ ဦးကို တိုက်မိလို့ ၁ ဦး သေဆုံး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး မြေနီကုန်းမှ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းအထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက် စမ်းချောင်းမြို့နယ် မြေနီကုန်းမှ ဗဟန်းမြို့နယ် ဗိုလ်စိန် မှန် ဘောလုံးကွင်းအထိ လူ ၃၀၀ နီးပါး ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း ယင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုကို ဦးဆောင်သူများက ပြောဆိုသည်။
နယ်စပ်ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရန် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီးဟု အိန္ဒိယသံရုံး တာဝန်ရှိသူများ ပြောဆို
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် ပြဿနာ၊ အိန္ဒိယဘက်မှ မြေကျူးကျော်မှု များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မည့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယသံရုံး တာဝန်ရှိသူများ က ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း အထက်ချင်းတွင်းဒေသ လူငယ်များကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်လျှင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ရန်အထိကတိခံဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ် ဆောင်နေသည့် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးများအနေဖြင့် မိမိတို့ ၏ဆောင် ရွက်ချက်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် ရာထူး မှနုတ်ထွက်ကြရန်အထိ ကတိခံဆောင် ရွက်နေပါကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းက စစ်တွေတွင် တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြော ဆို လိုက် သည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်တန်းပြ ၄၀၀ ကျော် ခေါ်ယူ၊ လုပ်သက် ကန့်သတ်ချက် ပယ်ဖျက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လစ်လပ်နေသော အထက်တန်းပြနေရာ လေးရာကျော်အတွက် ရာထူး တိုးနှင့် အပြောင်းအရွှေ့ လျှောက်ထားသူ အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမများကို လုပ်သက် ကန့် သ တ် ချက် ပယ် ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၃) အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြာရေးမှူး (စီမံ) ဦးညွှန့်ရွှေ က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဦးကျော်နေ၀င်း၊ ဦးဇွဲနေ၀င်း၊ ဦးအေးနေ၀င်းတို့ သုံးဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အေပီ)
မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော မြေး များ က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်ပြင်ဆင် နေကြောင်း မကြာသေးမီက သတင်း မီဒီယာ များအား အသိပေး ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်သူစစ် အစိုးရနှင့် ပတ် သက်နေ သည်ဟု ဆိုသော ထူးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတေဇပိုင်ဆိုင်သည့် အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်(AGD)၏ ရှယ်ယာများကို အများဆုံးဝယ်ယူ လုပ်ကိုင်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှ CCOEC(China National Corporation For Overseas Economic Coop-eration) ဟုခေါ်သည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ငွေအရင်းအနှီးထုတ်ပေး ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟု ဦးအေးနေ၀င်းနှင့် ဧရာဝတီ သတင်းဌာန တို့၏ မေးမြန်းခန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆုများရရှိသူများ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ပညာတော်သင်ကုန်ကျစရိတ် ၏ သုံးဆပြန် လည်ပေးလျော်ရမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၇- နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆုများ ရ ရှိသူများ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ထမ်း ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ပညာတော် သင်ကုန်ကျစရိတ်၏ သုံးဆပြန်လည် ပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပစ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေကြ တဲ့နေရာ မှာ အဟန့် အတားရှိနေတယ်လို့ ပြောကြဆိုကြတဲ့ အသံထွက်လာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ခရီး ပေါက်ပြီ လဲ? တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မူကြမ်းအတွင်းထည့်ဖို့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ NCCT ဘက်က တင်ပြထားတဲ့ အမျိုးသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် နဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရေးဆို တဲ့အချက်ကိုလည်း အစိုးရဘက်က လက်မခံဘူးလို့ ပြောနေကြတာတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘောတူစာ ချုပ်ထဲမှာ ဖက်ဒရယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုမသုံးဖို့ အစိုးရဘက်ကပြောဆိုတာဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အတားအဆီး ဖြစ်နေတယ်လို့ NCCT အဖွဲ့ရဲ့ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။
ကျောက်မဲရဲစခန်း၌ အချုပ်ခန်း ဖောက်ပြေး၊ ၃ ဦးသေ၊ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် မြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် အချုပ်သား ခုနစ်ဦးက အချုပ်ခန်းဖောက် ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ခိုက် ထွက်ပြေးသဖြင့် ရဲက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာ အချုပ်သားသုံးဦး သေဆုံးပြီး ရဲလေးဦး အပါအဝင် ခြောက်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကျောက်မဲမြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း ဟားမတ်စ်အဖွဲ့တွေ ၂ ဘက်စလုံး၊ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှု တွေ ပြု လုပ် နေကြပြီး၊ ယာယီ အပစ်ရပ် သဘောတူမှု ကို တခြား တစ်ဘက်က စတင် ဖောက်ဖျက်တဲ့ အကြောင်း၊ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ နေကြပါ တယ်။
မလေးရှား လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ တဲ့၊ ယူကရိန်း နိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်းက ဒေသကို၊ ထိန်းချူပ်နိုင်ဖို့ အတွက်လို့ ဆို ကာ၊ ယူကရိန်း အစိုးရ စစ်တပ်တွေ ဟာ၊ ရုရှား လိုလားသူ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေ ကို၊ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တိုက် ခိုက် လာနေပါ တယ်။
နိုင်ငံလုံးချီ အပစ်ရပ်ရေး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံး ပါဝင်သင့်၊ မသင့် လိုင်ဇာညီလာခံ ဆုံးဖြတ်မည်
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား ချုပ်ဆိုရန် စီစဉ်နေသော တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်သင့် မသင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လိုင်ဇာ လက်နက်ကိုင် ထိပ်သီးညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်းက ပြောဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ သန်းတစ်ရာမြောက် လူဦးရေဖြစ်တဲ့ Chonalyn ကို မိခင်ဖြစ်သူ Dailin Duras Cabigayan က ပွေ့ချီထားပြီး အစိုးရပေးတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်ကို လက်ခံနေစဉ်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သန်း ၁၀၀ မြောက် နိုင်ငံသားအဖြစ် မွေးဖွားတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို အစိုးရ အရာရှိတွေ က ကိတ်မုန့်နဲ့ ကြိုဆိုလိုက်တဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာနေတဲ့ တိုင်းပြည်လူဦးရေကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ အခု မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးငယ်ကို သင့်တော်တဲ့ လူနေမှု အဆင့် အတန်း ရရှိအောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ် စိုးရိမ် ပူပန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ခရိုင်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပြ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ဆန္ဒပြနေစဉ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ခရိုင်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပြပွဲကို ဇွန် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှစတင်၍ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဂျေယန်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရေကြီး၊ မြေပြို၍ လူသေဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ဂျေယန်းစခန်းရှိ စိုးရိမ်ရသော အိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော်အား ဘေးကင်းရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ထားရ
မြေပြို၍ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဂျေယန်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းကို တွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့နယ်အနီး ဂျေယန်းစစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာ သွား မှုကြောင့် ရေကြီး၊ မြေပြို၍ လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် စိုးရိမ်ရသည့် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၂၃ ခု ကို ဘေး လွတ်ကင်းရာ နေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးထားရကြောင်း ဂျေယန်းဒုက္ခသည်စခန်းမှ သိရသည်။
‘‘အောင်ဆန်း’’ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကို ပြည်တွင်းပညာ ရှင်များဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးမည့် ဒါရိုက်တာနှင့် ထုတ်လုပ်သူများကို ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေး၌အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး ကပြောသည်။